Umhla My Pet » Ingaba umncwasile Wena? Khangela Ezi Iimpawu!
ukubuyekezwa: Sep. 24 2020 | 3 min ukufunda
Ingaba unayo mfo ukuba unomdla kodwa ungaqinisekanga iimvakalelo zakhe? Wakha Uyazibuza ithetha ntoni xa esenza izinto ezithile okanye oziphatha ngendlela ethile? Wakha wazibuza ukuba yeyiphi kwezi mpawu kufuneka sijonge phandle ukuba ukwazi ukuba ingudlalani ngenene nani?
Ukuba iphendulwe affirmative ukuba yonke le mibuzo, mhlawumbi ufuna iingcebiso ezimbalwa ukukunceda ukuhamba ngapha uze ufumanise ukuba ngokwenene kuwe.
Ngaba ukugcina zoqhagamshelwano iliso?
Ukuba mfo uthetha ukuba ugcina zoqhagamshelwano Iliso ixesha elide, ke ukuba abe ngumqondiso ukuba otsaleleke kuni ngokunjalo. nokuba, guys uneentloni Kwakhona ukubamba zoqhagamshelwano iliso, nangona ixesha elifutshane nexesha.
Ngaba ukuba ndidanile?
Musa ingasikhaba mfo neentloni njengoko ingafikeleleki. Ukuba blushes xa ukufuphi, ngoko kukho indima yakho ukuqala incoko kwaye bancede mfo phandle njengoko kufuneka ukufa ukuthetha nawe. Nakwabo guys abangakwaziyo oneentloni, Uneentloni ke ngokuqinisekileyo umqondiso okulungileyo ngenxa uthsuphe olufihlakeleyo nomdla wakhe kuwe.
Ingaba luvo bakhe kokuthatha?
Wakha wazibuza ukuba kutheni loo mfo kusoloko kubonakala angonwabi xa ezikungqongileyo? kakuhle, oko akuyi kusoloko kuba ufuna ukushiya. Abo nje luvo bakhe kokuthatha njengoko ezama ukuba azihlanganisele nesibindi ukuthetha nawe.
Ingaba nasemashiyini akhe wamvusa?
Nangona mfo ukuba unomdla kuwe unokuzama ukufihla amehlo akhe xa ithetha nawe, ukuba uphakamisela nasemashiyini akhe ngamehlo iphangalele, ngoko oko kubonisa ukuba ingudlalani nawe.
Ngaba ukuba copycat?
Le Into enomdla. Ukuba ingudlalani nawe, engaqondanga uya bakope into oyenzayo!. Ukhe waqaphela ukuba xa uhambisa isandla sakho iinwele, isandla sakhe siya iinwele zakhe kakhulu? Okanye xa ukushifta emlenzeni, ayenzayo kakhulu? Yeyona umlingo wokudlala kwaye ezi ezinye iimpawu ekufuneka balumkeleni.
Ngaba ukuthambeka intloko yakhe?
Ngaba wakha waphawula ukuba mfo ebilayo intloko yakhe kuni njengoko athethe naye? Oku kuthetha ngokwenene uyakuthanda yaye iphenjelelwa ingqalelo, khon 'ukuze kuphoswa nto uyithethayo.
Ingaba kukho uncumo edlala emilebeni yakhe?
A mfo ukuba unomdla uya encuma ube ngumqondiso ukuba ufuna ukuthetha nawe. ngoko ke, thabatha oko nje kumema ukuqalisa incoko.
Ngaba eme akimbo?
Umfana otsaleleke uza kuzama ukubonisa ukuba uziqeshile-baqinisekiswa emi izandla ezibekwe phezu sesinqeni, okanye ubhontsi kwi amasango ibhanti yakhe. Olu phawu akufunekanga ukuba ayicacanga, kodwa kusebenza njengesikhokelo.
Ingaba abafundi bakhe ezandisiweyo?
Ngaba ubusazi ukuba, ukuba ufuna umntu, abafundi bakho banzi kwaye ukuba akukho, ukuba isivumelwano? Inoku engqondweni, konke ekufuneka uyenze khangela amehlo akhe njengokuba nawe incoko. Ukuba bandise, ngoko uyazi ukuba unomdla.
Ngaba bachukumise nje wena?
Ingaba mfo wakha Ndaninika touch ethambileyo, njengoko udlula? Waza yena ngokuqinisekileyo unomdla kuwe kwaye ufuna ukufaka ingqalelo yakho. nokuba, balumkeleni abo ithubeleza abo, kakuhle, nje ezinambuzelayo lowo ufuna ukudlala jikelele kubudlelwane. Uyayazi ndithetha ukuthini, musa ukuba?
Ekubeni ngoku ukuqonda iimpawu bakujongele ukwazi ngephanyazo xa ingudlalani nawe, lixesha lokuba athathe yenkomo ngeempondo. Musa ukuba sicande ithuba kuwe!
Kutheni Ufanele Umhla Intombazana nenja